ဝ ကိစ္စဘယ်လိုရှင်းမလဲ ဝ ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ဘူး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Interview with UN special rapporteur on human rights in Myanmar
ဒေါ်စုကြည်က အမှားတွေ ထပ်ဆင့် မှားခဲ့တယ်ဗျ »
ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားတဲ့ စကားပါဒါ့ အပြင်ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့် ပြောလိုက်မယ်ကမ္ဘာ
မှာ 9:11 ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာကတဲကမွတ်စလင်ဆို ရင်အစွန်းရောက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Ideology
ကအတော်များများစိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားကြ တယ်ဒါ့ အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာက Xenophobia
ရောဂါကလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်ပြုခံရပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်ခေါ်သွင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ
ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ ဗမာအများစုဟာကိုယ့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ရင်မုန်းတဲ့ Psycho
ဝင်နေတယ်ဒါကိုပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားမွတ်စ လင်တွေသိဖို့ လိုတယ် ဒါကိုသိနေတဲ့ လူတစ်စုက
ဖောက်ခွဲပြလိုက်တာ စိတ်ရှည်သီးခံပြီးဒီမိုကရေ စီနိုင်ငံကိုအခက်အခဲဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ပြီးချီတက်
Ko Ko Gyi Yes Muslims R minority in Myanmar and Myanmar R minority in the world….International accepted NORMS is majority rule over minority with passion and must protect the minority’s rights. Not to bully, hate, loot, chase out of houses, burn the minority’s houses and worshiping places…FULL STOP…If not, that is NOT democracy but Mobocracy.
Wunnaphe Thaw တရုတ်ခိုးဝင်တာနဲ့ကုလားခိုးဝင်တာ ဘဲစားဘဲချေချေလို့မရဘူး နှစ်ဘက်လုံးကိုတားဆီးရမယ် တရုတ်က နိုင်ငံရေး အာဏာ ကို ရော နယ်မြေကိုရော မထိပါးသေးဘူး ရောနှောနေတာ ဘယ်သူကအန္တရာယ်ကြီးလဲ ကြီးတာကိုအရင်ထိန်းချုပ်ရမှာ ကြေးတိုက်နေရင်အငြင်းအခုန်ပဲဖြစ်ရမှာ ကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး (Sic)
Phyo Maung Maung Win ကဲ..အဲဒါဆို ဝ ကိစ္စဘယ်လိုရှင်းမလဲ ဝ ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ဘူးခင်ဗျားတို့ အသိဆုံးပါ
Kyaw Nay Hlwan တရုပ်ကနိုင်ငံရေး ဝင်မစွက်ဖက်ဘူး ဆိုတာကိုလုံးဝလက်ခံလို့မရပါဘူး။
တရုပ်ကို အလွန်အကျွံ အားကိုနေလို့ ပြသနာတွေ ပိုဖြစ်နေတာပါ။
တရုပ်က နယ်မြေရော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရော ငွေနဲ့သိမ်းနေတာပါ။
Ko Ko Gyi In late 60’s after the Anti-Chinese riots in Rgn., Radio Pekin, Ba Ka Pa radio broadcasting from inside China announced, ” One hundred thousand Chinese Communist soldiers disappeared from Chinese Military and join Ba Ka Pa with ammunition.” That was the official news broadcast of Ba Ka Pa and could be search for the record in history. Since then those 100,000 Chinese soldiers joined forces with Ba Ka Pa as WA army. ALL the Wa leaders are born in CHINA. How come they all are accepted not only as citizens BUT TINE YIN THARS? Now also, they R speaking Chinese, Chines Military Commanders are training them, they have Chinese songs, Chinese Radio, Chinese TV and movies. FYI I AM NOT A ROHINGYA.
Nay Zar Aung ဟားတိုက်ပြီးရယ်ချင်စရာကောင်းပါလားတရုတ်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဟဟဟ
Tags: Ba Ka Pa, Burma, China, Communist Party of China, Ko Ko, Myanmar, Rohingya people, Television
This entry was posted on October 30, 2013 at 5:57 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.